Bosnia na Herzegovina - njem nleta
Kemgbe afọ 1996, njem nleta na Bosnia na Herzegovina emeela nke ọma, ọ ghọọ akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba mba. Ókèala nke ókèala ahụ bụ nnukwu ihe ntinye aka na mmepe njem nleta. Ruo afọ 2000, mmụba nke ndị njem na-enwe kwa afọ bụ pasent 24. N'afọ 2010, isi obodo Bosnia na Herzegovina, Sarajevo, so n'ime obodo iri kachasị eleta. O doro anya na Bosnia bụ otu n'ime mba ndị njem kachasị ewu ewu.
Obodo ahụ na-enye njem nleta maka ọ bụla uto - site na ski na oké osimiri. Obodo nta dị ala na-enye ndị ọbịa ya mgbakwunye na ezumike oge - njem nlegharị anya, ezumike osimiri , nakwa ihe ndị ọzọ, nke ga-eweta ọtụtụ obi ụtọ. Ọ bụ maka ịkwa mma, ịchụ nta, ịgba ọsọ, na-ele ụmụ anụmanụ na gburugburu ebe obibi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Oké osimiri njem
Bosies na Herzegovina na-asacha ya site n'Oké Osimiri Adriatic. Mmiri mmiri dị ọcha na osimiri dị mma kwa afọ na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta na-achọ ikpo ọkụ n'oké osimiri ahụ. Nanị ụzọ dị n'akụkụ oké osimiri bụ Neum . Nke a bụ obodo oge ochie, nke a kpọtụrụ aha na 533, ma dịka ebe a na-emegharị ebe ndị mmadụ na-aga, ọ bịara mara na n'etiti narị afọ nke iri abụọ. Oké osimiri ahụ dị jụụ, n'enweghị iyi egwu na ebili mmiri. Nke a emeela ka ọtụtụ ugwu na-echebe nke oké osimiri site na ifufe na oke mmiri nke Peljesac, nke na-echebe mmiri mmiri na Neuma site na oké ifufe. Neum bụ ebe dị mma maka ezumike ezumike.
Ogologo ugbo ala di kilomita iri abuo na ise, otutu ihe ndi mmadu nile bu ndi okwute, ma enwere ebe aja. Obodo ndị dị na Bosn na-enye ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche: mmiri mmiri, ịgba mmiri, ịgba mmiri, njem mmiri, na ihe ndị ọzọ.
Ọ dịghị mkpa ịkwụsị n'ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ na obodo ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịgbazite ụlọ ma ọ bụ akụkụ nke ụlọ ndị bi n'ógbè gị. Ọ na-efu ntakịrị ọnụ ala, ọtụtụ ndị nwere ike iyi ihe mara mma.
Ihe dị ka pasent 90 nke ala Bosnia na Herzegovina kpuchiri ugwu, n'ihi ya, njem nleta oyi na mba a na-eto eto na ọnụ ọgụgụ dị oké ọnụ ahịa. Obodo etiti njem oyi na Bosnia bụ ski sloping na snowboarding. Ebe ntụrụndụ ndị kasị ewu ewu na ski bụ ndị dị nso na Sarajevo - Yakhorina , Igman na Belashnica.
Yakhorina bụ ebe amaala obodo, ebe ọ bụ na n'afọ 1984, a na-eme egwuregwu asọmpi Olympic nke XIV na ebe a. Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere uru ndị a dị ugbu a nke ebe a, Yakhorin bụ ebe nlekọta ahụike, nke na-esote Ngalaba Nchịkwa National, mkpọmkpọ ebe n'oge ochie, ọtụtụ ọgba na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị na-ewu ewu bụkwa Blidinje, Vlašić, Kupres na Kozar. Enweghị ọtụtụ ndị njem nleta ebe a, dịka na gburugburu Sarajevo, na ụzọ adịghị mfe. Ya mere, ebe ndị a dị mma maka ịmalite.
Njem nje SPA
Enweghi ọganihu nke okike dị na Bosnia na Herzegovina, ọ bụghị nanị na ịma mma ya, kamakwa na mmiri na mmiri ịnweta mmiri na-enye aka na mmepe nke njem nlegharị anya. Taa, ọ dị nnọọ mma! Na mgbakwunye, ezumike dị otú a ga-aba uru maka onye ọ bụla.
Ihe mara mma nke ntụrụndụ ntụrụndụ bụ n'eziokwu na ha na-anọkarị n'ime obodo ndị dị jụụ, n'ime obi anụ ọhịa. Ọrụ nke ebe a maka ntụrụndụ: iji melite, zuru ike ma nye ohere ịnọ na ọdịdị otu na otu. N'ihe gbasara Bosnia, ị ga-enwe ohere ka ndị mmụọ a mara mma, ka ugwu na ugwu nta gbara gị gburugburu.
Ebe a na-akpọ Bos-Vruchitsa bụ ebe a na-ewu ewu na Bosnian. Nke a bụ ụlọ ọrụ nlekọta ahụike na ndị nleta kachasị na mba ahụ, nke na-enye ahụ ike na usoro ntanetị dị iche iche ma ọ bụ ogbako na ọdịdị mara mma. Kwere, gaa ihe omume dị mkpa na ebe ndị mara mma magburu onwe ya, ebe ọ na-atọ ụtọ karịa obodo na-acha uzuzu uzuzu.
E nwekwara ike ikwu na Ilija, bụ nke a ma ama n'oge ọchịchị Soviet. Mana taa, ọ dịbeghị mkpa. N'ebe dị mita 500-700 n'elu elu igwe, na basin nke Sarajevo-ubi, a na-ahụ ebe a na-ahụ maka mmiri.
Ọ na-adọta ndị njem nleta na mmiri si na +32 ruo +57.6 ogo. Ha nwere kemịkị pụrụ iche pụrụ iche, ma jikọta ya na apịtị apịtị, nke a na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ ebube. E wezụga nke ahụ, Egwurugwu Igman gbara ya gburugburu, ịma mma ya enweghị ike ịhapụ gị enweghị mmasị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe ụtọ niile nke ntụrụndụ ka ọ bụrụ nke zuru oke, mgbe ahụ, ị ​​ga-eleta Bosnia. Ọ bụ ebe a ka ị ga-enwe mmetụta zuru ezu na ikuku ihe ọkụkụ na enweghị ego. Ọ na-amalite site na Hutovo Blato Bird Reserve. Ebe a dọtara uche nke nnukwu nnụnụ, ya mere, International Council gụnyere ya na ndepụta nke ebe kachasị mkpa maka nnụnụ. A naghị enwe ụdị nnụnụ ndị dị otú ahụ na ebe ndị ọzọ.
A na-emepe nleta omenala na akụkụ nile nke Bosnia. Na mpaghara nke steeti e nwere ọtụtụ ebe obibi ndị mọnk, ọdịbendị ọdịbendị, ihe ndị ochie na-achọta na, ya mere, ihe ngosi nka. Mba ahụ echekwawo ihe ime mmụọ nke Iso Ụzọ Kraịst, Islam na okpukpe ndị Juu. Ndị Bosnian na-akwanyere ndị Jentaịl ùgwù, ya mere, obodo niile na ebe ncheta dị iche iche na-echebe ma kwado ya.
Ọdịiche omenala nke Bosnia dị iche iche na a pụrụ ileta mbibi nke oge ochie ma ọ bụrụ na achọrọ. Egg bụ ihe ngosi ihe ngosi nka na-emeghe, ọ bụ ụlọ ochie nke dị n'ugwu. Inye na Egg , o yiri ka ị na-agafe n'oge - n'okporo ámá cobbled, mgbidi e wusiri ike na mgbidi nkume na-eme ka ebe a bụrụ ihe anwansi.
I nwekwara ike ịga na National Museum of Bosnia , nke chịkọtara ihe niile kachasị ọnụ ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ nke ụlọ ihe ngosi nka bụ ihe nketa ọdịnala, dịka ọ bụ iwu nke ngwụsị afọ XIX. O nweghị ihe na-adọrọ mmasị bụ ileta obodo ochie nke Mostar , nke a na-echekwa ya n'oge anyị. Ọ bụghị n'ebe dị anya na ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ - Kravice waterfall .
Ịnọ na Bosnia na Herzegovina ị gaghị enyere aka ịga na ndagwurugwu ochie nke Latịn , bụ nke mere ememe Agha Ụwa Mbụ. Mgbe ị gara ya, ị ga-eche ọdachi nke ihe ndị ahụ n'ụzọ zuru oke. Tụkwasị na nke ahụ, akwa ahụ nọgidere na-ahụ ya, ya mere n'onwe ya bụ uru ụlọ.
A na-ere ngwaahịa na ihe ncheta Bosnia kasị mma n'ahịa ahịa na Sarajevo - Marcala . Ruo ọtụtụ narị afọ, ebe a ezutewo ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa site na Balkans nile. N'ebe a, ị nwere ike ịzụta uwe a na-eji aka, textiles, sweets obodo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Switzerland - ebe nkiri
Eziokwu banyere Iceland
Osimiri nke Belgium
Ugwu na Andorra
Visa ka Estonia
Kedu ka ọnụ ala si efega Cyprus?
Ememe na Montenegro
Visa maka Malta maka ndị Russia
Ihe ngosi nka nke Monaco
Ime ihe eji eme ihe - ndụmọdụ maka ịkasi nkasi obi na nkasi obi
Corn porridge - mma
Na hotels John Travolta chọrọ onye masseur-nwoke na foil na windo
Uru nke mmanụ flaxseed maka ahu
Ihe ọṅụṅụ Celery - ọma na ihe ọjọọ
Ememe ntụrụndụ ndị mmadụ
Aprịkọt jam ke sirop - uzommeputa
Marinade maka nwa atụrụ shish kebab
Akara site na akwụkwọ na aka aka ha
Cotervine maka nwamba
Risotto na artichokes
Megan Markle dere edemede banyere ịkwado nsogbu ụmụ nwanyị na mba Eastern
Onyinye nye di ya n'ememe agbamakwụkwọ
Kate Middleton gara London Children's Center
Kwuo si igwe igwe
Ụlọ maka nkịta na aka ha
Kedu linoleum ka mma maka kichin?
14 nkịta dị iche na nkịta
Ugwu nke Crimea
Style nke 1920s
Pate na multivariate